Dugsi xannaano iyo hawlo kale oo waxbarid - Utbildningsguiden
› Dugsi xannaano iyo hawlo kale oo waxbarid
Yaa dhigta dusi xannaano?
Hawl kale oo waxbarid
Xannaanada inta ay dugsiyada xannaanada iyo guriga xilliga firaaqadu aysan furneyn
Dugsiga furan ee xannaanada
Hawlo furan oo xilliga firaaqada ah
Carruurta u dhexeysa 1 iyo 6 sano.
Dugsiga xannaanada ama hawsha kale ee waxbariddu maaha wax khasab ah. Ula jeeddadu waa in waalidka loo suurta geliyo in ay waalidnimada la wataan shaqo, si ahaanna waa in carruurtu helaan meel ay dhiirri-gelin ka helaan, horuumarna ku sameeyaan.
Dugsiga xannaanadu waa in hal abuurnimada, fuduulinimada iyo isku kalsoonida carruuta uu dhiirri geliyaan. Carruurtu waa in ay fursad u helaan in ay horuumariyaan karaankooda wax baarid, xiriir sameyn iyo kan dib wax uga fikirid. Hawsha baritaanku waa in ay carruurta ku dhiirri gelisaa in ay wax billaabaan, mas’uuliyad qaataan, siisana fursad ay ku shaqeeyaan iyagoo madax bannaan iyo iyagoo kuwa kale la jira.
Barayaashu waa in ay dhiirri geliyaan, taxaddina ku sameeyaan carruurta si ay u tijaabiyaan aragtiyagooda, u xalliyaan dhibaatooyin, fikradoodana wax qabad ugu beddelaan. Waxay taasi keeneysaa in ay tusaale ahaan ciyaaraan, heesaan, wada shaqeeyaan, wax rinjiyeeyaan, baaraanna dabiicada. Cuntada waxaa lagu cunaa dugsiga xannaanada, waxay taasi ka mid tahay hawlaha wax baridda. In la abuuro kalsooni iyo xiriirro wanwanaagsan oo waalidka lala yeesho waa hawl muhiim u ah dugsiga xannaanada.
Waxaa jir dugsiyo xannaano oo xor ah iyo kuwo ay degmadu leedahay. Dugsiyada xannaanada ee xorta ah waxaa tusaale ahaan lahaan karaa iskaashato waaliddiin ah ama iskaashato shaqaale ah, urur samafal ama shirkad saamiley ah.
Waa degmooyinka cidda mas’uulka ka ah in degmada gudeheeda laga helo boosas dugsi xannaano oo u baahida u dhigma iyo in carruurta boos la siiyo. Degmada ayaa sidoo kale mas’uul ka ah in ay koontaroosho in dhammaan hawluhu ay buuxinayaan shuruudaha tayada iyo ammaanka. Dugsiyada xannaada ee xorta ah isla sharcigaas ayaa loo adeegsadaa dugsiyada xannaanada ee degmada.
Dugsiga xannaanadu maaha mid khasab ah. Degmadu waa in ay dugsi xannaano siisaa carruurta laga billaabo marka ay 1 sano jiraan:
Marka ay waaliddiintu shaqo la’aan yihiin ama ku jiraan fasaxa waalidka
Haddii ilmuhu uu qabyo baahi u gaar ah iyadoo ay sababtu tahay xaaladda qoyskiisa.
Carruurta ay dhaleen waaliddiinta shaqa la’aanta ah ama ku jira fasaxa waalidka waa in boos lagu casuumaa 3 saac maalintiiba ama 15 saac usbuuciiba. Degmooyinka qaarkood waxay bixiyaan waqti intaas ka badan.
Waxaa intaas dheer in ay tahay in ay degmadu dugsi xannaano siiso:
Dhammaan carruurta marka uu ilmuhu buuxinayo 3 sano (dugsiga guud ee xannaanada, 3 saac maalintiiba),
Carruurta sababo jir ahaaneed, maskax ahaaneed ama sabab kale ugu baahan taageero gaar ah oo xagga horuumarkooda ah.
Seddaxda saac ee dugsiga xannaanada ee guud waa lacag la’aan laga billaabo sanadka uu ilmuhu buuxinayo 3 sano. Waqtiga ka badan seddaxdaas saacadood waa lacag. Waa degmada ama cidda xannaanada iska leh cidda go’aamineysa inta lacag ah ee laga bixinayo booska dugsiga xannaanada.
Lacagta la bixinayo waxay ku xirantahay heerka dakhliga ee waaliddiinta. Maanta waxay dhammaan degmooyinka oo dhan adeegsadaan nidaam la dhaho maxtaxa. Maxtaxan wuxuu ka dhiganyahay xad sare oo aan ka badan qoysaska laga qaadi karin.
Hawl kale oo waxbarid xannaano carruureed oo loogu tala galay caruurta u dhexeysa 1 iyo 12 sano.
Waxaa jira afar nuuc oo kala duduwan oo ah hawlo waxbararid:
Xannaano ah waqtiga aysan furneyn dugsiyada xannaanda ama guriga xilliga firaaqad
Dugsi xannaano oo furan
Hawlo xilliga firaaqada ah oo furan.
Xannaanada wax baridda waxaa la siin karaa waaliddiinta raba taas, halkii ay carruurtoodu aadi lahaayeen dugsi xannaano iyo guriga xilliga firaaqada. Xannaanada wax baridda waxay shaqaaluhu ku bixin karaan guryohooda, maqsin kale ama xal ay wada helaan qoysas fara badan.
Sida ku cad xeerka iskoollada waa in kooxa carruurtu ay si habboon isugu dhafanyihiin, iyo in tiradoodu ay macquul tahay, maqsinnada ay joogayaanna loogu tala galay arrinkaas. Sidoo kale waa in ay joogaan shaqaale leh waxbarasho ama khibrad dabooli karta hawlaha waxbarid ee ay carruurtu u baahanyihiin. Hawlaha wax qabadku waa in ay ka duulaan canug walba baahidiisa, loona qaabeeyo si xoojineysa xiriirro dhinac walba leh iyo wadajir bulshonimo.
Xannaano waxbarid waxaa furan kara degmo ama qof gaar ah. Degmadu waa in ay ku dadaashaa in ay dadka siin karto xannaano kale oo wax barid halki ay carruurta oo dhan ka wada aadi lahaayeen dugsi xannaano ama guriga xilliga firaaqada haddii ay jiraan waaliddiin taas doonaya.
Degmooyinku kharash macquul ah ayey ku qaadan karaan xannaanada waxbaridda. Maanta waxay dhammaan degmooyinka oo dhan adeegsadaan nidaam la dhaho maxtaxa oo loogu tala galay xannaanada carruurta. Maxtaxan wuxuu ka dhiganyahay xad sare oo aan ka badan qoysaska laga qaadi karin, waxaan lagu saleeyaa dakhliga waaliddiinta. Maxtaxan wey khuseysaa xitaa xannaanada waxbaridda, kuwa ay degmadu leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaba.
Degmadu waa in ay ku dadaashaa in ay xannaano bixiso waqtiga aysan furneyn dugsiga xannaanada iyo guriga xilliga firaaqada ilaa inta loo baahanyahay iyadoo la tixgelinayo shaqada waaliddiinta iyo sideeda kale xaaladda qoyska.
Dugsiga furan ee xannaanada waxaa loogu tala galay carruur aan dugsi xannaano ku qorneyn. Hal waalid ama qof kale oo weyn ayaa canugga usoo raacaya dugsiga furan ee xannaanada. Dugsiga furan ee xannaanadu waxay carruurta siisaa hawlo waxbarid iyagoo koox ku jira oo uu waalidku la joogyo. Isla mar ahaantaas waxay dadka waawey helayaan wada jir bulshanimo. Carruurtu kuma qorna ee waaliddiinta ayaa go’aaminaya inta uu ilmuhu ka qeyb qaadanayo.
Hawlaha furan ee xilliga firaaqada waxaa loogu tala galay 10–12 sano jirrada ee aan u baahneyn xannaanada iyo ka warhaynta lagu bixiyo guriga xilliga firaaqada ama xannaanada waxbaridda. Qoysaska ayaa go’aankeeda leh goorta iyo inta jeer ee ay carruurtu ka qeyb qaadaneyso. Hawsha furan ee xilliga firaaqada waxaa badanaa isku duwa iskoollada, guryaha xilliga firaaqada iyo/ama hawlaha kale ee degmada ee xilliga firaaqada ee loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada.